I-Deep Groove Ball Bearings Esikhathini Sezizinda Eziyinhloko - I-Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
Ama-Deep Groove Ball Bearings Esikhathini Sezizinda Eziyinhloko
I-Deep Groove Ball Bearings Esigabeni esisekelwe phansi
I-deep groove ball bearings ingasho ukuthi iyingxenye yezintambo zokugubha, isisetshenziswa somshini ngalesi sigaba ku-polyvalence sinamandla kakhulu, kanti izingxenye eziyisisekelo nazo ziyizinga eliphakeme lokumiswa, izici ze-serialization.
Ama-rock groove ball bearings ekusebenziseni ukushayisana ichazwa ngokuthi ukusebenza phakathi kwe-shaft kanye ne-shaft emkhatsini wokusebenza isikhathi eside ngenxa yokuguqulwa kwe-friction kushintshana, ukuze ukunciphisa okuhle kokuthwala ngenxa yokungqubuzana umonakalo, kungathiwa yizinto eziyinkimbinkimbi kakhulu.
Futhi lapho kusetshenziswa imishini yemishini esetshenziswe ekusetshenzisweni kwemishini ehlukene emisebenzini yokusebenza kanye nezimo zokusebenza zihluke kakhulu, ezenza ukuthi izingxenye ezithintekayo ekuphatheni, isakhiwo nokusebenza, njll ziye zahlukana Ukusetshenziswa kwezidingo zemishini. Ngakho ukukhiqiza kuzovela ezihlukahlukene izici zesakhiwo.
Ama-bear groove ball bearings angasho ukuthi yiwona osetshenziselwa kakhulu umkhiqizo owenzayo, okwakhiwa kokubunjwa kwendandatho yangaphakathi, indandatho yangaphandle, ibhola lensimbi, i-cage, amafutha, izigxobo kanye nezinye izingxenye ezihlobene. Ngesikhathi esifanayo njengoba
I-groove ibhola ejulile enezintambo zangaphakathi neyezingaphandle zine-groove ejulile ene-arc, irediyo yesiteshi encane kakhulu kunebhola lebhola. Isetshenziswe kakhulu ukuthwala umthamo we-radial, kodwa futhi ingamelana nomthwalo othile we-axial. Uma ukukhanya kwe-radial yokukhiqiza kwanda, nge-angular contact ball bearing bearing function, ingakwazi ukumelana nomthwalo omkhulu we-axial, kodwa futhi nokujikeleza okukhulu kwejubane. Ukubopha emgodini wegobolondo kanye ne-axis yesihenqo esivumelanayo 8 '~ 16', sisasebenza, kepha sithinta impilo yayo yesevisi. Uma kwenzeka isivinini esikhulu futhi akufanele sisetshenziswe uma kwenzeka ukufaka amabhethri ebhola kungasetshenziswa ukuthwala uhlobo lokuthwala umthwalo we-axial omsulwa.
I-groove ebhethini ye-groove ebanzi ngokuvamile isebenzisa ipulangwe yensimbi yensimbi enamathela amabili, kodwa ukubheja okukhulu noma okusheshayo kusetshenziselwa isikhala esiphezulu, i-cage efana ne-camping cage, ukubheja kwebhola elijulile le-ball groove ukulondoloza Uhlaka luvamile eqondiswa ngogu wangaphakathi noma wangaphandle.
Uma kuqhathaniswa nezinye izinhlobo zokubheja zoluhlobo oluthile, i-coofficient ejulile yebhola elibhekene ne-friction coefficient liyingcosana, idlidliza nomsindo nazo ziphansi, umkhawulo ophakeme wejubane, ukucaca okuphezulu, uhlobo olukhethiwe lokukhethwa kokuthwala. Nokho, uhlobo lokuthwala okungapheli, alufanelekile ukuthwala umthwalo osindayo.
Isistimu Yezinhlelo Zokuhamba Ezingezona Ezijwayelekile
I-Mini Groove Deep Ball Bearings Yokunciphisa Okubi